Ethiopia oo Xidhay Dad ka Badan 800 – Rasaasa News
Ethiopia oo Xidhay Dad ka Badan 800
Addis Ababa, August 23, 2018 – Dawlada EThiopia oo xidhay in ka badan 800 oo ruux oo loo haysto in ay ka qayb yihiin colaado cusub oo ka bilowday degaanada ay Oromada dariska yihiin, sidaas waxaa sheegay masuuliyiin sare oo ka tirsan dawlada.
Todobaadkii hore waxaa lagu xidhay deegaanka Oromo in ka badan 500 ruux, oo gaystay, dil, dhac, barkicin, gubid guryo shacab, gubid beeraha bunka iyo jaadka sidaasna waxaa sheegay Beyissa Kuma oo u hadlay deegaanka ay Oromadu dhibka u gaysatay.
Masuuliyiintu waxay sheegeen in lagu xidhay deegaanka koonfurta ilaa 300 ruux.
Dhibaatooyinkii hore ka dhacay Ethiopia waxaa loo samababaynayey in ay dadku ka soo horjeedeen siyaasadii dawladii hore.
Isku dhacyadan cusub waxaa sabab u ah Abiye Axmed, oo isticmaalaya siyaasad ay ka soo horjeedaan dadku, isaga oo samaynaya wax alaale wixii maskaxdiisa ku soo dhaca sida;siidayn maxaabiis badan, heshiis deg deg ah ee Eriteriya iyo isaga oo si sharci daro ah u faragalinaya dastuurka fadaraalka.
Isku dhacyada badan waxaa keenay xoriyada dheeraadka ee uu Abiye Siiyey qoomiyada Oromada taas oo cagta marinaysa deeganada la dariska. Sidaas waxaa yidhi garsooraha guud ee dalka Berhanu Tsegaye.
Deegaanka Soomaalida ayaa ka mid meelaha qaska siyaasadeed ee ugu badan uu ka jiro, waxaana lagu soo rogay gabaka xukun milari, dad badana way ka bara kaceen.